I-Pitchfork Condo, uJackson Hole - I-Airbnb
I-Pitchfork Condo, uJackson Hole
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Anna
3 BR, 2 BA, 2 story condo, izinkuni ezivuthayo, 4 cable TV, wifi edolobheni Jackson.
Indawo! Indawo! Indawo! Lesi sakhiwo sihamba ibanga ukuya edolobheni iJackson futhi siza nezindawo ezinhle ezibheke izintaba zeGrand Teton. Idolobha laseJackson linikeza izindawo zokudlela ezinhle, amagalari, amathiyetha, ukuyothenga kanye ne-Elk Refuge edumile.
Leli gumbi lokulala eli-3 kanye negumbi lokugezela eli-2 elicishe libe ngu-1500 sq ft condo libekwe ngaphansi kweTown Hill enikeza indawo efanelekile yeholide lakho laseJackson Hole. I-condo yethu ihlanzekile, iyathandeka, iqondene nawe, futhi iyikhaya elamukelayo elenza izivakashi zakhona zizwe sengathi ziyizivakashi endaweni ekhetheke kakhulu. Uzoba nesikhathi sempilo yakho kuleli holide e-Jackson Hole.
Jabulela ukuhamba okumangalisayo, izindlela zamabhayisikili, igalofu elincane, isilayidi se-Alpine, ukugibela amahhashi, ukuphakama kwesitulo esiphezulu ngaphandle kokungena emotweni. Futhi i-Grand Teton National park yokungena itholakala kuphela imizuzu eyi-10 ukusuka endaweni yethu.
I-Pitchfork Condo yethu inamakamelo okulala angu-2 anemibhede yobukhulu bendlovukazi kanye negumbi lokulala elilodwa elinombhede wenkosi. Ikamelo ngalinye line-TV yalo. Sinezindlu zokugezela ezi-2 ezigcwele. Izivakashi ziphathwa kuzo zonke izinsiza ezingase zizidinge. Igumbi lokuhlala linendawo yokuhlala ene-TV, indawo yomlilo ethokomele namafasitela anokukhanya kwelanga okumangalisayo. Indawo yokudlela nekhishi kuncikene negumbi lokuhlala. Ikhishi lihlome ngokuphelele futhi linebha yasekuseni. Igumbi lokuwasha liza nosayizi ogcwele wewasha nesomisi.
I-Jackson Hole iyindawo ekhethekile lapho ubusika nehlobo bemukelwa khona ngenjabulo elinganayo. Le ndawo inikeza ukushushuluza okumangalisayo ebusika kanye nemisebenzi eminingi yangaphandle ehlobo. Indlu ingaba yisisekelo sezivakashi ezivakashela i-Yellowstone National Park eqhele ngamamayela angu-60.
I-condo yethu ifaneleka ngokuphelele ukuba sizindle ngokuthula ngezigigaba zosuku: kusukela ekushushuluzeni eqhweni, e-snowboarding & snowmobiling kuya ekudobeni, kayaking, ukugibela ibhayisikili, ukugibela amahhashi nokuhamba izintaba e-Grand Teton National Park. Nethezeka ngemva kwe-adventure yosuku ngaseziko ngenkathi ilanga lishona phezu kwe-Tetons.
Izwa ucezu lwezulu e-Jackson Hole ngokuhlala kwakho endaweni yethu ethokomele elungele izivakashi unyaka wonke.